Clevelander-Hovey's Bear Trap-Indian Lake - I-Airbnb
Clevelander-Hovey's Bear Trap-Indian Lake
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAngie & JD
UAngie & JD yi-Superhost
Yonwabela i-rustic charm yokuhlala kwi-Log Cabin yokwenyani kwaye uphumle kwisandi samaza aqhekeza kunxweme oluhle lwe-Indian Lake.
Njengoko usondela kwi-Hovey's Bear Trap, uqhuba uphuma eManistique ebukekayo, e-MI, uzifumana ungqongwe yimithi yompayina ebukekayo kwaye unokuva kancinci kancinci lonke uxinzelelo lwehlabathi lokwenyani lusihla. Into ephambi kwayo lichibi elihle laseIndiya elingqongwe ziikhabhinethi ezinomtsalane kunye neziluqilima zokwenyani ezilinde ukufika kwakho.
I-Clevelander log cabin yenye ye-Hovey's Bear Trap's 11 log cabins eyakhelwe kwi-1920's. Zonke iikhabhathi ziye zahlaziywa kwakhona kule minyaka igcina umtsalane wazo wakudala waseNorthwoods kwifanitshala entsha kunye nezinto eziluncedo ngelixa zigcina iikhabhinethi ezikhethekileyo zaseNorthwoods. IClevelander libali elinye, iikhabhathi ezimbini zokulala ezinekhitshi ebanzi, igumbi lokuhlambela kunye neveranda evaliweyo enelanga ngaphambili.
Indawo efanelekileyo yeHovey ibonelela ngokufikelela ngokukhawuleza kuyo yonke into enokunikezelwa ngummandla. Ebusika ujabulele ukuhamba ngekhephu, ukutyibilika, ukukhwela ikhephu kunye nokuloba emkhenkceni. Ehlotyeni, ukuhamba ngeenyawo, i-ATVing, igalufa, ukuqubha, ulwandle, ukuloba kunye ne-kayaking / ukukhwela amaphenyane kwenza ukuzonwabisa okukhulu.
Indawo yethu enkulu yokupaka inendawo eyaneleyo yokupaka inqwelo-mafutha yakho yekhephu, i-ATV kunye neetreyila zesikhephe. Ukuqaliswa kwesikhephe kusezantsi nje esitratweni kwaye idokhi yethu ekwisiza iyafumaneka ukuze upake isikhephe sakho. Ukufikelela kwimowuli yekhephu kungaphantsi kwemayile enye ukusuka eHovey.
Ikhabhinethi yeyakho ukuba uyonwabele ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho indawo eninzi apha yokwenza oko uthanda. Yenza iinkumbulo; yenza izinto ngendlela yakho. Uninzi lweendwendwe zethu ziindwendwe eziphinda-phinda… Yiza ufumanise ukuba kutheni!
Ezinye izinto omawuziqaphele:
UClevelander wabelana ngedokhi, unxweme olunesanti kunye neendawo zomlilo kunye nezinye iikhabhinethi zikaHovey. Sinikezela zonke iilinen kunye neetawuli. Ikhabhathi nganye inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elineembotyi zekofu ezintsha, igrinder kunye nembiza yekofu. Sihambisa iinkuni kwindawo yokucima umlilo esecaleni kwechibi. I-grill yamalahle iyafumaneka ukuze isetyenziswe kwikhabhini nganye, kodwa unoxanduva lwamalahle kunye nolwelo olukhanyayo.
IHovey's Bear Trap ikwiPeninsula yaseMichigan ebukekayo kwiChibi laseIndiya elihle. IManistique kukufutshane nje (imizuzu esi-7) ukusuka eHovey apho unokufumana zonke izinto eziluncedo edolophini kubandakanya igrosari, iivenkile zokutyela kunye neevenkile.
Nokuba yeyiphi na into onomdla kuyo kukho into kule ndawo kuwe. Umtsalane wendawo yengingqi ibandakanya: Ikhosi yeGalufa yase-Indian Lake, ukuloba, iingxangxasi, ii-lighthouses, i-Kitch-iti-kipi, i-Kewadin Casino, iHlathi leSizwe le-Hiawatha, i-hiking and snowshoeing trails kunye nokuthenga. Okanye uhlale phantsi, uphumle kwaye wonwabele ukuzola kwindawo yethu entle enemithi, ephambi kwechibi.
Ichibi laseIndiya kunye neendawo ezijikelezileyo liphupha lomthandi wangaphandle! Umdlalo owaneleyo kunye ne-panfish kumachibi ethu amaninzi, imilambo kunye namatheku ziqinisekisa ukubanjiswa okulinganiselweyo yonke imihla. Indawo yaseManistique inamathuba amahle kubazingeli kunye nabo bafuna nje ukonwabela ubuhle obuqaqambileyo, bemibalabala.
Umbuki zindwendwe ngu- Angie & JD
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Manistique